Caustic soda maparera
Caustic mushaba flakes
Caustic mushaba hwakasimba
Caustic mushaba mvura
Karusiyamu carbide 295L / kg
Glacial acetic asidhi
Mushaba dota chiedza
Mushaba dota batana
3rd kudzora bato
Yavaibvisa sulfate anhydrous
SLS 92% 94% sodium lauryl sulphate K12 upfu uye nee ...
Ethyl doro 96% 99% uye IPA 99%
TCCA 90 trichloroisocyanuric asidhi 90%
Kurapa Kwemvura Alunimium Sulphate
CHIEDZA ACETIC ACID / CARBOXYLIC ACID
SODA ASHODZA KUNYANYA
Soda Madota CHIEDZA SODIUM CARBONATE
SODA ASH MURI
PVC Resin MUMusika
PVC ramangwana rakaramba richidonha, ichifambisa nzvimbo kuti iwire. Padivi rekunze, nekuda kwekuderera kwazvino mumusika wemafuta asina kugadzirwa uye kukanganisa kwezviitiko zveveruzhinji zvekunze, kudiwa kwePV kwadzikira zvakanyanya, ...
Sodium cyanide chinhu chisina kugadzirwa, iri chena mvura-soluble yakasimba. Cyanide ine hukama hwesimbi, saka munyu uyu une chepfu zvakanyanya. Yakareruka kudhirowa, iine kupera simba kwearumondi hwema. Soluble mu wate ...
Inokanganiswa neyakaganhurirwa kugadziriswa kwemabhizinesi, epamba acetic acid mutengo wakasimuka zvishoma mudanho rekutanga, kuwedzera kweanosvika makumi mashanu / tani, asi musika wazvino uzere uchiri kuratidza mamiriro ema overs ...
MARKET YEMAHYDROGENI PEROXIDE
Pakutanga kwesvondo rino, mashandiro emusika wehydrogen peroxide wakasanganiswa. Kuchamhembe kwaive kushoma, uye kumaodzanyemba kwakamirira kuona kupera. Iyo yekupa uye yekuda nhau yaive yakanyanya kusimbiswa. Caprolacta ...
SODA MADHORO RIWEDZA SODA MADHODZI DENSE
Iyo yemumba soda madota mutengo unogadzikana svondo rino. Iyo yekuzasi yakanyanya kutarisana nekutenga, uye iko kwechokwadi kutapurirana kuri kushanduka. Zvinotarisirwa kuti mutengo wesoda madota uchagadziriswa mukati me ...
Address: No.1023, 10F, Bldg B, HOPSON Junjing Square, Hangyun 1st road, TEDA, Tianjin 300457, China.